Yako Yekutengesa Yekutungamira Tevedzera Up Template | Martech Zone
Nderipi zano rako rekurwisa kutevera pakutungamira kunotungamira? Ndinotya isu kazhinji tinoperevedza… kusangana neine tarisiro uye nekuregeredza kutevedzera uye kugara pamusoro pepfungwa. Iri zano rakaoma rekupinda munzvimbo uye chikonzero chakanaka chekudyara mune CRM uye kutengesa otomatiki sevatengi vedu kuSalesvue.
MarketBridge ikambani inonyanya kugadzirisa musiyano uripo pakati pekushambadzira nekutengesa kunatsiridza kugona kwekambani kuburitsa mafambiro ari nani uye kuita kuti ivharwe. Vakagadzira iyi infographic inonzi, 9 Matipi Ekutevedzera NeMutungamiri weMhando Dzese, iyo inopa yakakura hwaro hwaro hwekutungamira nekutungamira.
Maitiro Ekutevera Up neMutungamiri weMarudzi ese
shandisa Big Data kudzidza nezve kutungamira kwako.
Sarudza zvakanaka yako metrics.
Pindura nekukurumidza kutungamira.
Manage iyo kutanga kuonana.
Shandisa email kutungamirira kutarisira.
Shingairira kana mutungamiri wako ari ndagadzirira kutaura.
Chengetedza zvakanaka CRM Zviwanikwa.
Funga rubatsiro kubva kunze.
Ipa zano kure kune vakasununguka.
Tags: teveratungamira kuteverakutungamira rwendo infographickutungamirira kutarisiratungamira kurera infographickusimudzirakutengesa kutungamirakutengesa kutungamira infographic
Buzzoole: Ita Misasa neBrand Advocates uye Vanokurudzira